Tenerife - kwekulu seziqhingi zaseCanary Islands. Minyaka yonke it is wavakashela yizivakashi 3 million. Okuhamba phambili kwe-zokungcebeleka lesi siqhingi Costa Adeje, eyaziwa amahhotela yayo okunethezeka.
Ukungabikho imimoya enamandla kanye uhlaza ukwenza resort eyinhloko Tenerife ngempela indawo yasezulwini. Costa Adeje inesimo sezulu enothando nemnene, ngakho-ke kungenzeka ukuthi ukuhlangana nezivakashi ngasiphi isikhathi sonyaka.
Amazinga aphansi ezilotshwe yokungcebeleka phakathi naso sonke isikhathi kokuma Meteorological, wayeneminyaka engu-15 ° C (ebusika), kanye nezinga lokushisa we "abandayo" sizini +17 ... +21 ° C. Kepha ehlobo, kule sizini ku Costa Adeje sezulu ephelele ejabulela ebhishi. Ngokwesilinganiso, izinga lokushisa libonisa +25 ... + 30 ° C
Izimvula kule yogu Tenerife abasakwazi ezingavamile, imvula ibe nyangazonke ngokulambisa sifinyelela 7 mm. Kulokhu, ngenxa ukusondela olwandle izimila Hells uhlale aluhlaza ngenkathi ashisayo, amaholide asibi ukungakhululeki.
Ngaphezu kwalokho, yokungcebeleka Tenerife lokushisa kwamanzi ngo-December, July, August, Septhemba, Okthoba, November nobubanzi kusuka +21 ... +24.3 C. izinyanga Esibi kuze kube iholidi ngaphambi ogwini esiqhingini kancane. Ikakhulukazi, akukho ukhululekile kakhulu ngasekuqaleni kwentwasahlobo. Nokho, ngisho noma ufika e Tenerife ngoMashi, izinga lokushisa kwamanzi okungenani kuyoba ukhululekile - mayelana 18 ° C
Tenerife Isiqhingi itholakala e-Atlantic Ocean, amakhilomitha angu-300 ngasogwini Afrika futhi km 1,000 kusuka ezwekazini Spain. endaweni yaso 2034, 38 sq. km ugu - 342 km. Adeje resort itholakala ogwini eningizimu-ntshonalanga ye siqhingi, eduze resort intsha Las Americas.
Ukuze abaseRussia, cishe akukho enye indlela ukuze uthole abantu abalisebenzisayo eziQhingini zaseCanary indiza Tenerife.
Adeje kuyinto km 20 kusukela eningizimu sezindiza isiqhingi. Kube ukulandela amabhasi ezimbalwa (№№ 450, 111 kanye 343). Ngo Adeje lula ukuthola kanye nezivakashi Usufikile e sezindiza eningizimu yalesi siqhingi. Kusukela lapho ukuya resort, ungathatha inombolo ibhasi 343 noma ukushintsha izitimela edolobheni laseSanta Cruz enanini umzila 111.
Tenerife ngokuvamile hamba ibhece olwandle mnene futhi abalale isihlabathi okumsulwa.
Sekukonke resort has izindawo ezintathu ebhishi:
"Plyayya de Fañabé".
"UTroy mina" futhi "Troy II".
Kulawa, ingqalasizinda yayo ihlukile lolwandle "El Dyuk". Kube kufanele zokushintshela, izindlu zangasese, izihlambi, yokupaka, ngocingo, sebhasi, itekisi ukuma, nokunye. Ngenxa yokungena mnene ku ebhishi kolwandle "El Dyuk" ikakhulukazi uncamela umndeni abeza eholidini nezingane ezincane.
Labo abafuna ukuba yedwa isihlobo, khetha ukuphumula ku "Plyayya de Fañabé". Lokhu lolwandle liphakathi imfashini kakhulu.
Ziyakwazi yelinyenti "Troy mina" futhi "Troy II". Kuyinto resort endala ogwini, lapho kukhona konke okudingayo ukuze uphumule. Nokho, ngenkathi okusezingeni eliphezulu basuke njalo aminyene.
Cishe zonke emabhishi aziwona sandy, wasendaweni noma ukungeniswa liphuzi.
Njengezinye zokungcebeleka Tenerife, Adeje linikeza izivakashi zayo ezihlukahlukene ongakhetha yenhlangano yokuzilibazisa ngezinga elingakanani. Okokuqala, lapho ihamba khona ezikebheni kanye yezikebhe, phakathi kwesikhathi lapho izivakashi zingathola ngiphefumula umoya nolwandle, zibabaza ukubukwa olwandle ngalé kwesiqhingi and whale ababukele. Abantu abasha abafika resort ngaphandle izingane, singakwazi ukukhuthaza iqhaza nokuhamba ku-Reserve "Barranco del Infierno" noma ezinye ezikhangayo engokwemvelo Adeje.
Ukuze nekujabulisa wonke umndeni, kuhlanganise nezingane abaneminyaka engu-6 nangaphezulu, kufanele uvakashele abadumile amanzi ipaki "Siam Park" (Ikheli: 38670 Costa Adeje, Santa Cruz de Tenerife, ithikithi yezingane kubiza 22 Euro, omdala - 32 euro). Budebuduze yokungcebeleka futhi Zoo Jungle Park, lapho ungabona khona ubuhle ezihlukahlukene zezilwane abahlala eCanary Islands.
abadlali e Tenerife futhi ngeke be bored, ngoba kukhona eningi igalofu omkhulu walo mdlalo.
Labo abaye abantu abalisebenzisayo eziQhingini zaseCanary, izoqinisekisa ukuthi Adeje e Tenerife ingenye emakhoneni ezithule. Nokho, lokhu akusho ukuthi izivakashi iyawumphika ithuba ukuzijabulisa in ebusuku amaqembu futhi ema-disco eziningi. Ngo Puerto Colon ukuphila eseduze bila phezulu qala ekuseni, futhi kukhona eziningi zokuzijabulisa emgwaqeni Veronicas.
Labo abeza resort engcono Tenerife - Adeje - futhi ufuna ehlukahlukene uhambo lwakho, unikeza ezihlukahlukene imisebenzi. Ngokwesibonelo, izivakashi uyoba nesithakazelo ukuvakashela eCanary Islands esiqhingini La Gomera lapho emakhulwini amaningi eminyaka adlule, inhlokodolobha eziqhingi lasendulo. Ngo San Sebastian, izakhiwo eziningi ezindala nezindawo ehambisana nokuba khona kuyo Hristofora Kolumba. Ngaphezu kwalokho, ngo-La Gomera Garajonay National Park itholakala.
Omunye uhambo ezithakazelisayo - uhambo San Miguel Castle. Kukhona njalo ahlelwe Costumed jousting tournaments. Emnyango enqabeni izivakashi kuyakhexisa zaziziningi uwayehlalise. Bamema izivakashi ukuba abe ababukeli ngisho iqhaza ukulwa phakathi Knights abanesibindi, ukulungele ukulwela esivuna Donna enhle.
Amahhotela e-Adeje (Tenerife)
Ihhotela amane kanye aphambili inkanyezi resort kuthiwa okungcono ahlelwe emgqeni we-spa yesibili. I akuxhomekile eyinhloko holidaymakers e Tenerife (Adeje iyathinteka) - baseYurophu. Ikakhulukazi eziningi amahhotela e-British kanye nema abaseRussia. Ngenhlanhla, intsha Albion ukhetha Las Americas, e Adeje amahhotela ukuze ukwazi axazulule ngokuphepha nezingane, ngaphandle kokwesaba komakhelwane ezinomsindo.
Amahhotela Iningi baneHholo ivulekile okubhukuda, kuhlanganise nalezo nge echibini ehlukile. Kwezinye zazo kukhona endaweni eluhlaza lapho kuyoba elula sishaywe nezingane.
Njengoba ingxenye enkulu ye-akuxhomekile eyinhloko izivakashi Adeje amahhotela izivakashi ezivela ezweni lethu, abasebenzi reception zihlale khona, ukukhuluma ngesiRashiya. Isisiza zokuxhumana futhi ugwema ukungaqondani.
Phakathi emahhotela aphambili kuleli yokungcebeleka ngokuvamile ngokuthi:
Costa Adeje Gran Hotel 5 * (Bheka. Ngezansi).
Costa Adeje Palase 4 * nge Hydro massage pool ongaphandle kanye spa.
Fanabe Sosta Sur 2 okubhukuda, endaweni nudist futhi isikhungo Wellness.
Sol Sun Beach Apartamentos, elise 2 amaminithi kusukela beach.
Leli hhotela kubhekwa omunye the best in Tenerife. It is eyakhelwe esime "U" incwadi bendabuko isitayela Canarian. Holidaymakers uzothola amakamelo ethokomele nelibanzi, lapho kukhona khulula Wi-Fi. Ihhotela has a endaweni ivulekile yangasese, kodwa endleleni eya ebhishi ijubane unhurried kuthatha imizuzu 7 kuphela.
Izinzuzo Costa Adeje Gran Hotel 5 * sihlanganisa:
imenyu ephelele, lapho kukhona ushizi kakhulu, ham bendabuko, obomvu nezibiliboco, njll.;
ukusondela ku-nightclub adumile "acamana";
inkonzo enhle kakhulu;
kukhona boutiques eziningana futhi izitolo nazo zonke izinto ezidingekayo ekuhambeni ibanga ukusuka ehhotela.
Diving e Adeje
Olwandle ngasogwini resort iyikhaya zinhlobo ayisihlanu flora zasolwandle kanye nezilwane. Uthola ukwazi kwabo ngokuvakashela izikhungo dive Costa Adeje. Bangakwazi ukufunda indlela ukucwila emanzini ngokuphelele, ukuze ithole isitifiketi, ukuqasha impahla edingekayo nokunye.
Ngaphezu kwalokho, phakathi nendawo yesimanje ye Adeje izenzo "Tenerife eziphezulu Training", lapho abaqeqeshiwe abasubathi abavela kulo lonke elase ziqhingi.
Cishe wonke umuntu kwadingeka ukuphumula esiqhingini, uphawu eyayisele iholide bajabule. Ngokusho kwabo, inkonzo amahhotela the resort kakusekho udumo. Isikhathi esining impela ungezwa udumo ikheli abasebenzi ukuthi ubhekana yemfanelo yayo, okwenza kube unobtrusively futhi ngokuqonda.
izivakashi basutha, futhi ukudla okunhlobonhlobo amaningi izithelo, imifino nezinye izinto zasolwandle fresh. Nakuba Ihhotela ukhonza cuisine yezwekazi ikakhulukazi eduze emabhishi kukhona zokudlela eziningi, esebenza appetizers Canarian, amasobho, inyama deli, nokunye.
Kepha isimo sezulu, ukukhetha okubi kakhulu izivakashi ukuthola izinkambo in Tenerife ngoMashi. Nokho, uma bazimisele ukuthatha ebhukuda pool, hhayi olwandle, ngisho isizini ongaphakeme abantu abalisebenzisayo eziQhingini zaseCanary, ungakhululeka, kulapho kanjalo kwentwasahlobo ka amahhotela ahlinzeka izaphulelo eningi.
Manje uyazi lapho Tenerife. Costa Adeje (Spain) - indawo yokungcebeleka enhle kakhulu abantu abalisebenzisayo eziQhingini zaseCanary, lapho ungathola zonke athokoza ipharadesi iholide.
Gaziantep, Turkey: Indawo, amaphuzu kwenzalo Izibuyekezo
Indlela ukubhala ukubhala: yenza izinhlelo ukuze
"Energizer" - amabhethri ukuthi ingasebenza isikhathi eside!
Unturned kanjani ukwakha indlu ukuze ivikele zombie?